Ndinofanira kutanga kutanidza chivakwa nemahofisi kuti upe pasi webhusaiti yeforlinks pane chimwe chinhu chipi zvacho?
Mazuva ano, zvikonzero zvikuru zve-off-page Search Engine Optimization zvave zvinyanya kuoma kupfuura dzimwe nzira dzepa-peji SEO. Zvechokwadi, kuvakwa kwehutano hwakanaka (kusanganisira zviito zvaidiwa kuisa webhusaiti yeforlinks) zvakabatana zvakananga kune-peji peji SEO, kuva chikamu chinokosha chepisidho yakakwana pamusoro pekutsvaga injini yekutsvaga pachiyero. Zvinoreva kuti webhusaiti yega yega kana bhulogi inofanira kuva nehutano hwakasimba hwemashure hunoita kuti huwandu hwekuwedzera huve mukuvaka kwehukuru hukuru, uyewo chinangwa chikuru chekutonga maSERPs eGoogle. Zvechokwadi, chikamu cheshumba chekugadzira mazano chinowanzoda nguva yakawanda, uye dzimwe nguva inogona kutoda mari shoma yekutsvaga. Kunyange zvakadaro, kuva nehukama hwakasimba hunoita zvakakodzera kuita chero zvakadaro, izvo zvicharamba zvichibhadhara, kunyanya kubva pakuona kwehutariro kwenguva refu.
Kurumidza Kuwana Kwekuvakwa Kwako Kubatanidza
Sezvandatozvitaura, kuvaka chibvumirano chekufananidza kunofanira kuva pakati pezvinhu zvakakosha zvikuru. Zvechokwadi, kana iwe ukasarudza kuisa webhusaiti ye backlinks kana kunyange kutotora zvinhu zvose kunze uko munzvimbo - zvakanaka kwauri! Asi izvozvo hazvingakwaniki kuti unakidzwe nekatsettre yakanaka ye website yako ye backlink profile. Wakamboedza zvose zviri zviviri zvebhizinesi-chaiyo uye zvebhizimisi kuti upe pasi webhusaiti ye backlinks? Uye kana uchiri kungozeza nzira dzipi yekuedza kutanga-pano ivo. Pasi apa ndiri kuenda kunoronga kumusoro mazano ekuvaka maitiro anogona kukurumidza kukuunzira zvimwe zvingaenzaniswa muSeO.
Local Business Directories Directories
Hapana chikonzero chekutaura kuti kushandisa mahofisi emunharaunda kutumira webhusaiti kwemashure endangariro ingangodaro ndiyo nzira yakanakisisa yekutanga kuvakira backlinks. Kana uri kushanda nemasimboti aya kubvira pakutanga-kutanga-up nguva yewebsite yako kana blog - uri kutotama kufamba nenzira yakarurama. Usanonoka kubhadhara nguva nekuedza kuti uone kuti iwe wakanyorwa pane zvose zvinyorwa zvepamunharaunda. Itaiwo mashoko ose anodiwa, akadai sebhizimusi nzvimbo, maawa ekushanda, ruzivo rwekukurukura, nezvimwewo. Nenzira iyo, hauzongogoni kuwana retlink yakakosha asi unatsiridza kuonekwa kwako paIndaneti kune vatsva vekutsvaga, pamwe chete nebasa renyu rose rekuita pachiyero.
Ngatitarisei - maitiro aya emabhizimisi ezvemabhizimisi angaita seasingaoneki, kunyanya kana achienzaniswa nehurongwa hwemabhizimisi ose. Kunyange zvakadaro, zvinyorwa-zvemabhizimisi zvakasiyana-siyana hazvifanirwe kuregererwa, sezvo zvichiri nzira yakanaka yekusimbisa simba rako rekuvaka chikwata kana webhusaiti yako kana bhulogi ichienda kurarama. Cherechedza, zvisinei, kuti kuzviisa pasi kune zvinyorwa izvi zvinotora nguva shomanana, asi usatya. Kazhinji kazhinji, mazita akadaro achada iwe kuti upedze kubhadhara nzira dzako usati waunza webhusaiti yeforlinks - asi zvikomborero zvako zvinotaridzika zvinokodzera zvose zvinoshandiswa kunze uko, zvechokwadi.
Kutsvaga mikana yekuvaka musangano nemabhuku ewebhu, ramba uchiyeuka kuti unofanira kunge uine ruzivo rwebhizinesi rako rose rakanyatsogadziriswa uye rakaenzana zvakakwana nezvose zvakagadzirwa zvebhizimisi zvakanyorwa pane imwe nzvimbo pane Webhu. Kana zvisina kudaro, unogona kutarisana nemamwe matambudziko kubva kumativi emajini makuru ekutsvakurudza, uyewo kunyatsorongedza maitiro. Pakupedzisira, basa ramba riripo uye iva nechokwadi chekuongorora kaviri kuti iwe uri munzvimbo yakarurama uye yakakwana iwe usati wazadzisa nzira dzose dzekutumira kuti uwane izvo zvakakodzerwa shure zvakare Source .